IMohair eNingizimu Afrika
Imbuzi encane ye-Angora ivela esifundeni saseMpumalanga Ephakathi saseTurkey. Izilwane zokuqala, insikazi eyodwa kanye nenduna eziyishumi nambili zangeniswe eNingizimu Afrika ngo-1838, kodwa kwatholakala ukuthi zonke induna inyumba. Ngenhlanhla, lo doe wayekhulelwe futhi wabeletha izinyane lemvu. Izilwane eziningi zazingeniswa eNingizimu Afrika phakathi kuka-1857 no-1868 kuze kube yilapho umbusi waseTurkey ayeka ukuthunyelwa kwamanye amazwe. I-Angora Goat Breeders 'Society yasungulwa ngo-1892 futhi yaziwa namuhla ngokuthi i-Angora Ram Breeders.
I-Mohair ikhiqizwa cishe emapulazini angu-1000 e-Angora yezimbuzi ezungeze iNingizimu Afrika. Kukhona amapulazi angaba ngu-700 amakhulu okwanele okubhekwa ngokuthi 'abakhiqizi bezentengiselwano', kuyilapho ama-300 asele abakhiqizi abancane. Uma izimbuzi sezikhishwe izinwele zithathwa eNelson Mandela Bay ngabadayisi abathengisa i-fiber (izinwele) endalini.
UMoir ovela eNingizimu Afrika yonke, ulethwa eNelson Mandela Bay (ePort Elizabeth endaweni esifundazweni saseMpumalanga Kapa lapho kusetshenzwa khona.
Ichweba lasePort Elizabeth liwukuphela kwezimpahla zokuthumela impahla ezivela eNingizimu Afrika.
Izindwangu Ezivela Ezimbuzini
Izimbuzi ze-Angora eNingizimu Afrika ziyakhiwa ngokukhiqizwa kwe-mohair. I-Mohair iyi-fiber eqinile enokufudumala, elula futhi ehlala njalo, futhi ingafakwa kalula. It is ikakhulukazi esetshenziswa embonini textile zokugqoka, knitwear (ngesandla kanye umshini ukubopha), curving, upholstery impahla, nezingubo. I-mohair ihluke ngoboya ngoba inobuso obushelelezi obukhulu futhi bukhulu kakhulu, obuhle kakhulu.
Ukukhiqizwa kwama-Mohair kuvame ukuhlanganiswa nokukhiqizwa kwezimbuzi zezimbuzi ukuqinisekisa ukugeleza kwemali unyaka wonke. Ikhwalithi yezinyama ezivela ezinsheni ezincane ziyizinga elihle kodwa izidumbu zincane futhi zincane kakhulu kunezimvu ezondliwe ngendlela efanayo.
Imbuzi ye-Angora ingakhiqiza kuze kube ngu-5 kg ​​we-mohair futhi idinga ukwenziwa kabili ngonyaka njengoba ikhula phakathi kuka 12 - 15 cm njalo ezinyangeni eziyisithupha.
I-Angora izinwele kufanele zibe yifane ngokuphathelene nobude nobuhle, kufanele zibonise ukukhanya okuhle, isitayela esiqinile nesimilo esihle futhi ibe mahhala kusuka kumagubala enemibala kanye nekemp. (I-fibers ye-Kemp imhlophe, i-frit fiber ebuthakathaka evame ukuxubana noboya obuvamile besilwane.)
I-quality mohair ifika ngezindlela ezimbili eziyisisekelo - ukuvala ama-wavy-shaped-shaped - futhi kuvame ukudayiswa ngamamaki amathathu: amahle, aphakathi futhi aqinile. Ibanga linqunywa ngokuyinhloko ngeminyaka ye-goat Angora.
I-Cashmere, eyenziwa yizinwele ezincane ezingaphakathi kwengubo yezimbuzi, ikhiqizwa ngezinga elincane ukusuka ezimbuzi zeMbuzi ngaseButterworth e-Eastern Cape. Izimbuzi eziningi zendabuko zikhula i-cashmere phakathi kwezinwele zabo ngesikhathi sebandayo ebusika ukuze zivikele, ehlobo zichithe le cashmere ye-woolly.